Periostitis (periostitis) zvingava chirwere kana chakasimba. It zvinoenderana hunhu waro kosi uye kubudirira. Uyewo, pane nzira patsanura kuzvimba, izvo tinoda kupa kwamuri. Hwatine basa - kuti zivisa pamwe peculiarities mumwe mhando kuzvimba wayo kunotoda mufananidzo.
Simple kuzvimba periosteum. Chinokonzera chirwere ichi - kunotevera (kukura nyore periostitis pashure kukuvara, mitswe) uye napedyo kuti kuzvimba mune tsandanyama kana pfupa munyama. Inguva kuzvimba periosteum, zviratidzo varehwa muchimiro marwadzo uye mumatenhere nzvimbo kuzvimba kuti kazhinji inoitika munzvimbo yacho tibia, wayo periosteum. Kazhinji chimiro ichi zvirwere zviri liquidated voga pasina kurapwa uye migumisiro, asi pane zviitiko osteophytes (mapfupa growths musi), uyewo deposits calcium munyu.
Fibrotic kuzvimba. Chimiro chirwere ichi hachisi rikwanise chimiro - chete refu. Chikonzero chacho kukura - dzose kutsamwa kwenzvimbo yacho periosteum, inova nemhaka akaderera gumbo urikanwi chirwere, uyewo pasi pokudzora mapfupa necrosis (pamberi chirwere chearthritis). chirwere ichi ndiyo yaingowanikwa paumbwe fibrous zvinyama, iyo inosvitsa kuparadzwa mafupa. Inguva kuzvimba periosteum, mishonga nechinangwa kubvisa zvinokonzera pane zvinozoitika, uye zvakakodzera uye panguva yakakodzera zvokurapa kupindira zvinonzi nokukurumidza chapedzwa.
Mumwe mhando kuti zvinoda munhu akabva angoitei, ndiyo kukura munhu purulent kuzvimba pamusoro periosteum. Panyaya iyi, utachiona anopinda nzvimbo ronda kubudikidza periosteum pedyo munyama. The chikuru zviri chirwere ichi chiri kuwedzera tembiricha muviri kuti madhigirii 39 uye hwava kuderera. bvunzo General ropa diagnoses leukocytosis. The zvakakanganisa nzvimbo iri unopinza kuunganidza pus. Kana iwe tinya panzvimbo yakazara pus, asi kuchengetwa nokufamba - vibrations anokonzerwa Kumubata minwe pamusoro zvomoto munharaunda. Kazhinji, chirwere chiri kusachengeteka kukuru chimiro, asi dzimwe nguva zvakawanda kuramba tichishanda nyaya dzinomuka, kazhinji zviri varwere simba zvirwere. Kashoma, asi pane kukura purulent periostitis pasina nefivha uye marwadzo zviratidzo.
Uyewo, pane kuzvimba periosteum sero-albuminoznoe. It kunoratidzwa paumbwe yakawanda Urume (emura mapuroteni hunhu, rine tudonhwe ropa uye ane rima dzvuku Hue). sumbu Izvi zvinogona kusvika papi marita maviri. Kukuvadza exudate ndechokuti hunoita kuti kuunganidza yokuzviparadzanisa yacho periosteum kubva mafupa. Somugumisiro, kukura mapfupa necrosis kunogona kuitika. Mamirire zviratidzo mu zvirwere kwemhando iyi kurwadziwa uye kuzvimba kugara kwese ainyanya chokutsva.
Chirwere kuzvimba periosteum rinonzi ossificans. Anouya panguva dzose irritant zvainoita nzvimbo yacho periosteum. Muchiitiko ichi pane kuwedzera mapfupa kukura munzvimbo chokutsva. Kana vakurukurirane yabviswa, pane resumption zvakasikwa muitiro repfupa inotungamirwa. Apo chirwere kukura kunoitika nokukurumidza, zvinogona kuita kuti yokuzviparadzanisa of periosteum pamwe pus mukati. Urwa, kana yava vaunganidza vakawanda rinovhuna periosteum, uye pakuputsa pasi anotanga kuumba mafupa. The chirwere anoenderera kutanga, uye zvikuru nokukurumidza.
Chero chirwere kunoda rokukurumidzira nyanzvi zano uye kurapwa pakarepo.
Miliary tiibhii: siyana, chirwere, zviratidzo, kurapwa
How kubata manyoka neropa vana?
Kubva izvo pane nemburwa ari maoko? Chii chinokonzera nemburwa pamusoro minwe vana?
Back marwadzo kana vangakosora: zvichibvira zvinokonzera. vanachiremba 'kurumbidza
Kupatsanura kubudikidza mhando kufema kukundikana, pathogenesis, zvinhu etiopathogenetic
Sei I kubika kupfuura zvinonaka sipinachi muto
The Supreme Soviet the USSR - kubatana kwemasimba
How kutsanya uye richinaka kubika hove iri chakabikwa mugango: yakanakisisa Quick uye wongororo
Lipoma kumushure: Usarega kuongorora zvakare!
Whiskey "Blue Label": nhoroondo yokusika, mutengo. How kusiyanisa chepakuvamba kubva Kunyepa
Peterhof muSt Petersburg: photo, kero, nzendo
Potatoes Zekura: rondedzero siyana, wongororo
Nicole Eggert: Biography, upenyu pachake, Filmography
Kuyevedza manicure Shellac. Reviews uye chiremera
Portable uchiraira: yokutevedzera, chii kutsvaka pakusarudza
Sei kuverenga pakurwa? pakuberekwa zviratidzo
Mutemo Spikelets (chirevo "7-8"). Chakagadzirwa nenzara USSR, vakaurayiwa pakati Holodomor